တရုတ် JYD စက်ရုံ စျေးနှုန်း ပြတင်းပေါက် နှင့် ဗီရို ၊JYD
JYD စက်ရုံစျေးနှုန်း ပြတင်းပေါက်နှင့် ဗီရိုအတွင်း ကပ်ခွာဖျံများ ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
JYD အရည်အသွေးမြင့် သိုးမွှေးဖိုက်ဘာပစ္စည်း၊ ကောင်းမွန်သောဆံပင်အရည်အသွေး၊ 3M ကော်၊ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ခွာမှု၊ ပျော့ပျောင်းသောအသွင်အပြင်၊ မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ စိတ်တိုင်းကျဖြတ်နိုင်သည်၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ ပြတင်းပေါက်များသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဖုန်မှုန့်များ၊-proof နဲ့ ရေစိုခံပါတယ်။
ကော်တွင် 3M နှင့် စက္ကူဖြူစတစ်ကာ ရွေးချယ်မှုများ ရှိသည်။
1. အရည်အသွေးမြင့်။ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတရှိသော ယက်လုပ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပြတင်းပေါက်ပိတ်တိပ်သည် အထူးကော်နှင့် တာရှည်ခံပြီး ရေစိမ်ခံပါသည်။ဤ insulation strip များသည် သင့်အိမ်ကို ဆောင်းရာသီတွင် နွေးထွေးစေရန် ထိရောက်မှုရှိသည်။
2. Multipurpose Helper ။လေအေးကို အပြင်မထွက်ဘဲ ပြတင်းပေါက်/တံခါး ကွာဟမှုမှ အပူများထွက်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ကာ စွမ်းအင်ကို ချွေတာပါ။ရေစိုခံခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ပိုးမွှားများ တိုက်မိခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. Multi Scenario တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။မှန်ပြတင်းပေါက်/တံခါး၏ နှစ်ဖက်/အောက်ခြေတွင် ကပ်ထားသည်။မှန်တံခါး၊ ဗီရို၊ စာအုပ်စင်၊ ဗီရိုနှင့် စသည်တို့အတွက် doggie door အတွက်လည်း သင့်တော်ပါသည်။
4.Economic Pack & တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း။ပြတင်းပေါက်ရာသီဥတုဖောက်ခြင်းကို အသုံးမပြုမီ၊ မျက်နှာပြင်ကို သန့်စင်ပါ၊ စတစ်ကာကို အခွံခွာပြီး ကပ်ပါ။DIY တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် Self-adhesive Weather Strip
ပစ္စည်း 100% စစ
အရွယ်အစား 7*6mm/7*8mm/9*6mm စသည်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ ဖုန်မှုန့်/ အသံလုံ/ ဆူညံသံ ဆန့်ကျင်သည်။
လျှောက်လွှာ သစ်သားတံခါး၊မျက်မှန်။aluminum door etc တံခါးအောက်ခြေကွက်လပ်
ယခင်- အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း 5*6/7*5/6*6 ရေစိုခံရာသီဥတုဒဏ်ခံ တံခါးရွက်ဖျံများ
နောက်တစ်ခု: ဆီလီကွန် (ရေစိုခံ) pile weather strips များ
Self Adhesive Brush တံဆိပ်
Self Adhesive တံဆိပ်
Self Adhesive Seal Strip ၊
Self Adhesive မိုးလေဝသတံဆိပ်
Self Adhesive Woven Pile ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း။